SIDA LOO KOBCIYO KHAANADAHA GUINEA: TALOOYINKA UGU FIICAN - BEERAHA GUINEA EE TARANTA
Ugu Weyn Ee Beeraha guinea ee taranta
Sida loo kobciyo hurdooyinka guinea wanaagsan guriga
Gawaarida Guinea horeba waa shimbir guri.
Afrika waa meesha uu ku dhashay ee xayawaankan.
Waqtiyadii hore, waxay la keeneen dhulka xeebta casriga ah.
Fowl-ga Rein Guinea wuxuu muuqday dhulkayagii qarnigii 15aad.
Tan iyo markaas, waxay yihiin bred sida digaagga adduunka oo dhan.
Inkastoo xaqiiqda ah in shimbirahaasi ay asal ahaan ka soo jeedaan dalal diimeed, waxay si dhaqso ah u noqdaan kuwo caadeystey cimilada qaboobaha iyo qaab nololeedyada caadiga ah.
Haddii aad go'aansato in shimbirahan ku yaal aaggaaga ama beertaada, waa inaad sahamisaa qaar ka mid ah sifooyinka la xiriira shimbirahan.
Xaaladda doorashada shimbiraha yar yar, waxa ugu muhiimsan waa shuruudaha ay ku jiraan shimbiraha guinea.
Wixii maadada, wax waliba waa sahlan tahay. Fowl ee Guinea waa shimbiro aan qabyo ahaynSidaa darteed, content waxay la mid tahay hurdada. Sababtan darteed waa in hunqaha guinea lagu dari karaa daadad u eg coop digaag.
Markii hore, dabaqa waa in lagu daboolaa caws ama dhadhanka rinjiga, inkasta oo shimbirahaasi aysan si gaar ah ugu faani karin heerkulka. Ha isticmaalin maaddada qoyan ama qashinka ah, sida shimbiraha loo heli karo Aspergillosis.
Per 1 sq.m. waa in lagu xisaabiyaa 2 - 3 hargabka guinea. Sida coop digaag, waxaad u baahan tahay inaad hagaajisid baararka oo ah haadda guinea habeenkii qaadan doono. Laakiin xaaladdan qaansaradu waa in aan loo dhigin mid aad u sarreeya, oo dhererkiisu yahay 50 cm dhulka.
Haddii barbaarinta guinada guinea ay ka bilaabato stock yar yar, markaa shimbiraha yaryar, heerkulka ay u baahan yihiin. Calaamadaha ugu fiican waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin 18 ... 22 ° C, qoyaanka hawadu waa inay ahaadaan 65 ilaa 67%. Haddii heerkulku ka hooseeyo sida caadiga ah, shimbiraha ayaa la dhisi doonaa.
Haddii shimbiraha guinea ay kulul yihiin, markaa waxay noqdaan kuwo aad u daran, waxay cabbaan biyo badan waxayna ku dhow yihiin inaan cunno. Dhererka qoraxda waxay sidoo kale ku xiran tahay da'da shimbiraha. Yar yar shimbirta, iftiinka yar wuxuu u baahan yahay.
Gowrka Guinea wuxuu jiifin doonaa ukumo marka ay iftiin u tahay 16 saacadood.
Iyadoo bilawga jiilaalka, haddii aad go'aansato inaad shimbiraha ka baxdo sannad kale, waxaad u baahan doontaa inaad wax yar ka bedesho guriga. First of dhan, waa si aad u diiriso dabaqa, kuwaas oo, ku rid qashinka, tusaale ahaan, xumbo, iyo kor ka kore waxaad u baahan doontaa inaad calaamadiso caws ama balka.
Waa lagama maarmaan in la xiro dhammaan deyrarka si aysan diyaariyayaashu aysan "ku socon" guriga.
Waa inaad sidoo kale xasuusataa qadarka loo baahan yahay ee iftiinka, taas oo ah, waxaad u baahan doontaa inaad qalab nal u sameyso qaabka nalalka laydhka. Qolka waa inuu si fiican u qalajiyaa wakhti kasta sanadka, sidaa daraadeed waxaa ugu wanaagsan in daaqada ka soo baxdo saqafka tuubada hawada cusub ay socon doonto.
Marka heerkulka la dhigo mid sare, waa inaad ka fekertaa meel aad ku socotid shimbirahan. Waa inay jirtaa meelo badan, waa inay jirtaa jeexnaanta iyo cawska dhulka si ay haadda guinea dareemaan sida ugu macquulsan.
1 sarkaal waa inuu ku dhacaa 30 sq.m. daaqa. Dhulka guud ee socodka waa in lagu ilaaliyo shabaqa ama xayndaab leh dhererka ugu yaraan 2 mitir si uusan shimbirta u duuli karin xayndaabka.
Marka uu bilaabo inuu mugdi galo, waxaad u baahan tahay inaad shimbiraha oo dhan geyso qolka ay tahay in la sii daayo wax ka yar 6 saacadood ka dib marka subaxda la cuno.
Haddii shimbiruhu ay ka badbaadaan jiilaalka, waxay u isticmaali doonaan midba midka kale waxayna wada jiri doonaan adhiga caadiga ah inta lagu socdo.
Xayawaanka Guinea ee duurjoogta ayaa loo hayaa labo-labo. Ma'aha lagama maarmaan in la abuuro shuruudaha noocaas ah ee guriga lagu hayo, maaddaama hal lab ah uu ku filnaan doono 3 ilaa 4 dheddig.
Gowrida Guinea waa shimbiro aad u buuq badan.sidaas darteed waxay u baahan yihiin wakhti ay kuugu isticmaalaan. Marka shisheeye ama xayawaan kale ay u muuqdaan, waxay bilaabi doonaan in ay soo saaraan qaylo aad u xun, oohinta wadnaha, markaa si cidhiidhi ah uma baahna in laga saaro isla markiiba.
Sidoo kale, shimbiraha guinea waxay si aad u xun u laayaan xayawaanka kale ee beerta, sidaa daraadeed waxay u fiicnaan doontaa in shimbirahan shimbiraha laga saaro dhamaan qoysaska kale.
By cunto cunidda guinea guurka aan qabin. Shimbir qaangaar ah ayaa si farxad leh u cuni doonta qashinka cuntada, baradhada, xididdo, firiley, karootada iyo cawska cagaaran.
In cunto iyo halabuurka feed, guushaha guinea waxay u eg yihiin lakab, sidaas darteed haddii aad leedahay digaagga, markaa waa inaadan xitaa wax ku dhibin quudinta gaarka ah ee haadda guinea.
Marka haweenku bilawdo ukumaha, ka dibna qaybta borotiinka ayaa u baahan doona in lagu daro quudinta. Inta lagu jiro socodka, shimbiruhu waxay cuni doonaan cayayaanka kala duwan, sida snails iyo earthworms. Haddii aad go'aansato inaad ku dhex socoto beertaada guinea beerta, ka dib ha ka welwelin ammaanka sariiraha. Shimbirahaasi waxay waxyeelleyn karaan kaabajka, laakiin baradho waxaa kaliya oo lagu caawin karaa in la cuno walxaha Colorado.
Tirada cuntada ee hunqaha guinea waa in aysan aheyn wax ka badan 3 jeer maalintii.
Dumarka fowlka Guinea waa hooyooyin aad u xun.Sidaa daraadeed, xashiishyada waxaa loo isticmaalaa hirgelinta, ama waxay ukumo ku darsadaan digaagga.
Wixii foosha dhalidda, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho ukumaha la saaray dumarka 34 usbuuc. Ukun kasta waxay u baahan tahay in la iftiimiyo iyada oo loo marayo baakidhka. Maaraynta hawada waa in lagu dhajiyo meesha ugu dambaysa ee ugxanta, iyo dhexroorkeeduna waa inaan ka badnayn 1.2 cm.
Egg wuxuu u baahan doonaa qalab yar oo yar oo gacantaada ah oo fiiri jiirka. Waa in lagu hagaajiyaa qaybta dhexe ee ukunta ama wax yar ka fogee xagasha dhexe.
Ka hor inta aadan ukumaha ku ridin maskaxda, waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan hal usbuuc heerkul ah 8 ... 12 ° C iyo qoyaanka 75-80%. Iska ilaali inay hoos u dhigaan, taas oo ah, iyada oo cirbadaha ugu sareeya.
Miisaanka ukumo kasta oo aad rabto inaad ku rido gacmaha waa in uu u dhexeeyaa 38 ilaa 52 g. Waa inaad iska tuurtaa ukumaha oo soo iibsatay qaab aan caadi ahayn, oo leh qajaar, xayawaan, ama qolka hawada. Ka hor intaan la dhigin ukumaha qandhada, ku nadiifin leh uumi uumi ah. Qaabdhismeedku wuxuu ka kooban yahay saddex xilli.
Marxaladda koowaad - Tani waa xilligii laga bilaabo 1-da illaa 13-kii maalmood ka dib markii ukumaha la dhigay qandhada, heerkulka waa in lagu hayaa 37.8 ° C, qoyaanku waa inuu noqdaa gudaha 58-62%.
Marxaladda labaad - Maalinta 14-24, xaaladaha heerkulka waa in lagu hayaa qiyaastii 37.5 ° S, qoyaanka waa in la yareeyo 45 ilaa 50%.
Kadib dhamaadka xilliga labaad, ukumaha oo dhan waa in lagu hubiyaa baaritaanka. Haddii gudaha gudaha oo dhan laga buuxiyo xididdada dhiigga, ka dibna ukumahani wuxuu ku xiran yahay isugeyn dambe.
Dhamaan "qalab" waa in lagu dhejiyaa baakidh oo loo wareejiyo hatcher. Xadhigaan, ukumaha waa in lagu hayaa ilaa inta ay ka bilaabayaan in ay ka soo baxaan qolofka.
Heerkulka waa inuusan hoos udhicin 37.0-37.2 ° C, qoyaanku waa inuu u dhigmaa 58%. Marka ay ukumo hore u socoto naklyutnymi, ka dibna qoyaanka waa in la sara kiciyaa heerka 96%. Waqtiga muddada xaddidaadda waa 27 maalmood.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo taranka taranka.
Sida loogu talagalay shimbiraha yar yar, dhibaatadu waxay u kici kartaa oo kaliya heerkulka. Chicks da'doodu tahay 1-3 maalmood waa in lagu hayaa gudaha gudaha heerkul ah 35-36 ° C, laga bilaabo 4ta illaa 10aad ee heerkulka waa in hoos loo dhigo 34-30 ° C, iyo min 11aad ilaa maalinta 20aad heerkulku wuxuu u fiicnaan doonaa 30 27 ° C.
Intaa waxaa dheer, shuruudaha digaagga yar waa inay la mid yihiin sida shimbiraha qaangaarka ah.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad quudiso chicks. Ilaa 2 bilood waxay u baahan yihiin quudi 5 jeer maalintii, kadibna waxaa loo wareejiyaa 3 - 4 raashin maalintii.
Cuntada shimbiraha boqortooyadu waxay ku dhowyihiin nuujinta digaagga, laakiin waa inay leedahay borotiin badan, markaa waa inaad ku dartaa ukunta jarjartey, jiiska qaar, iyo hadhuudh la gooyey ama siriyalka qamadiga ah.
Sida digaagga, digaagga dhalinyarada waxay u baahan yihiin fiitamiino dheeraad ah, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid timirta jarjaran ama ukunta leysku xiirto oo ka soo jeeda meel kale. Sidoo kale on jidhka shimbiraha yar yar si fiican u saameeyeen cagaarka cusub.
Fagaarayaasha Guinea ma kala duwan yihiin digaagga iyo duufaanka ku saabsan xajinta iyo taranka, sidaas darteed haddii ay digaag u yihiin beertaada, markaa waxaad si kalsooni leh ula qabsanaysaa hargabka guinea.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beeraha guinea ee taranta 2019